Otu esi eme GIF animated maka mkpọsa ahịa ahịa email gị na-esote Iji Photoshop | Martech Zone
Otu esi eme GIF animated maka mkpọsa ahịa ahịa email gị na-esote Iji Photoshop
Fraịde, Jenụwarị 28, 2022 Fraịde, Jenụwarị 28, 2022 Douglas Karr
Anyị na-enwe oge dị ịtụnanya na-arụ ọrụ na onye isi ahịa Closet52, ihe ụlọ ahịa ejiji n'ịntanetị na anyị mere akara wee wulite site na ala maka ụlọ ọrụ ejiji hibere na nke ama ama na New York. Ọchịchị ha na-eso anyị na-arụkọ ọrụ mgbe niile na echiche imekọ ihe ọnụ maka mkpọsa ma ọ bụ atụmatụ ọzọ anyị na-eme. Dịka akụkụ nke mmejuputa ha, anyị wepụrụ Klaviyo n'ihi na Zụọ ahịa Gụnyere. Klaviyo bụ ikpo okwu akpaaka azụmaahịa ama ama yana njikọta siri ike na Shopify yana ọtụtụ ngwa Shopify.
Ihe kacha amasị m bụ nke ha A / B ule na Klaviyo. Ị nwere ike ịmepụta ụdị email dị iche iche, Klaviyo ga-ezipụkwa nlele anya, chere nzaghachi, wee zipụ ndị debanyere aha fọdụrụnụ ụdị mmeri - niile na-akpaghị aka.
Onye ahịa anyị na-edebanye aha na ozi-e ejiji na ụlọ ọrụ ahụ wee gaa n'ihu na-ekwupụta etu ha nwere mmasị na ụfọdụ ozi ịntanetị nwere ihe ngosi mmịfe nke foto ngwaahịa. Ha jụrụ ma anyị nwere ike ime nke ahụ, ekwetakwara m ma wuo mgbasa ozi na ule A / B ebe anyị zigara otu nsụgharị na ihe ngosi nke ngwaahịa 4, na nke ọzọ nwere otu ihe oyiyi mara mma, mara mma. Mgbasa ozi a bụ maka mbibi ire uwe ọdịda ha ka ha na-eweta ahịrị ngwaahịa ọhụrụ.
Ụdị A: GIF animated
Ụdị B: Onyonyo Static
Ekele foto na-aga ndị nwere nkà na Zeelum.
Ihe nlele mkpọsa ka na-aga ugbu a, mana o doro anya na ozi-e nwere eserese eserese na-aka nke ọma na onyonyo kwụ ọtọ… 7% oghe ọnụego... ma ihe dị ịtụnanya 3 ugboro ọnụego pịa-site (CTR)! Echere m na eziokwu ahụ bụ na GIF animated tinyere ọtụtụ ụdị dị iche iche n'ihu onye debanyere aha dugara ndị ọbịa ọzọ.
Otu esi eme GIF animated Iji Photoshop
Abụghị m ụdị pro na Photoshop. N'ezie, naanị oge m na-ejikarị eme ihe Adobe Creative Cloud's Photoshop bụ iwepụ ndabere na ịkwanye onyonyo, dị ka ịtụkwasị nseta ihuenyo n'elu laptọọpụ ma ọ bụ ngwaọrụ mkpanaka. Otú ọ dị, m mere ụfọdụ igwu ala n'ịntanetị wee chọpụta otú e si eme ihe nkiri. Ihe njirimara onye ọrụ maka nke a abụghị nke kachasị mfe, mana n'ime nkeji 20 na mgbe m gụsịrị ụfọdụ nkuzi, enwere m ike ịkụpụ ya.
Na-akwado onyonyo isi mmalite anyị:
akụkụ - GIF animated nwere ike buru oke ibu, yabụ ejiri m n'aka na edobere nha faịlụ Photoshop m ka ọ dabara na obosara email obosara 600px.
mkpakọ - Onyonyo mbụ anyị nwere mkpebi dị elu yana nha faịlụ dị oke elu, yabụ m megharịrị ha nha ma jiri ya tinye ha Kraken gaa na JPG nwere obere faịlụ dị obere.
Ntughari – Ebe enwere ike ịnwa gị ịgbakwunye animation Ike (dịka ọmụmaatụ mgbanwe na-ada ada) n'etiti okpokolo agba, nke na-agbakwunye ọtụtụ nha na faịlụ gị ka m wee zere ime nke ahụ.
Iji wuo animation na Photoshop:
Mepụta faịlụ ọhụrụ na akụkụ ndị dabara kpọmkwem akụkụ ị na-etinye na template email gị.
họrọ Ohere> Usoro iheomume iji mee ka nlele usoro iheomume dị na ntọala Photoshop.
Tinye nke ọ bụla oyiyi dị ka oyi akwa ọhụrụ n'ime Photoshop.
Pịa Mepụta Frame Animation na Timeline Region.
N'akụkụ aka nri nke mpaghara usoro iheomume, họrọ menu hamburger wee họrọ Mee Frames si n'ígwé.
N'ime mpaghara usoro iheomume, ị nwere ike dọrọ okpokolo agba n'usoro na ị ga-achọ ka onyonyo a pụta na ya.
Pịa fremu ọ bụla ebe ọ na-ekwu 0 sk, wee họrọ oge ị ga-achọ ka etiti ahụ gosi. Ahọrọ m 2.0 sekọnd kwa etiti.
Na ndọpụta n'okpuru okpokolo agba, họrọ ruo mgbe ebighị ebi iji hụ na loops animation na-aga n'ihu.
pịa Igha ka ịhụchalụ animation gị.
Pịa Faịlụ > Mbupụ > Chekwa maka Weebụ (Ihe nketa).
họrọ GIF site na nhọrọ dị n'elu aka ekpe nke ihuenyo mbupụ.
Ọ bụrụ na onyonyo gị egosighi ụzọ, wepụ ya Nghọta nhọrọ.
Pịa Save ma bupụ faịlụ gị.
Ọ bụ ya! Ị nwere GIF animated ugbu a iji bulite n'elu ikpo okwu email gị.
ngosi: Ụlọ ime ụlọ52 bụ onye ahịa nke ụlọ ọrụ m, Highbridge. M na-eji njikọ njikọ n'ime akụkọ a maka Adobe, Klaviyo, Kraken, na Shopify.
Tags: ule uleadobeAdobe Adobe Cloudadobe Photoshopanimation gifpịa-site-ọnụegoigwe okikectrecommerceemail ecommerceemail animation gifemail mkpọsaemail Marketingnyocha emailhighbridgeotúotu esi eme gif animatedimage mkpakọKlaviyokrakenmgbasa ozi ahịaemeghe ọnụegoPhotoshopPhotoshop gifPhotoshop nkuziụlọ ahịa
Otu esi edobe nkwenye email na Microsoft Office (SPF, DKIM, DMRC)